Sheekh Maxamed oo kaga hadlaya qeybtan labaad ee khudbadiisii halista ku-tagri-falka hantida ummada, sida loogu xadgudbo ayaa ku bilaabay; | Biyoguurenews.com
Home Faallooyin Sheekh Maxamed oo kaga hadlaya qeybtan labaad ee khudbadiisii halista ku-tagri-falka hantida...
Sheekh Maxamed oo kaga hadlaya qeybtan labaad ee khudbadiisii halista ku-tagri-falka hantida ummada, sida loogu xadgudbo ayaa ku bilaabay;
Sheekh Maxamed Sh. Cumar Dirir, ayaa sheegay in marka la doonayo in hantida ummada la ilaaliyo qofka xukuma loo baahan yahay inuu aamin noqdo, si ka u hooseeyana kaga daydo.
Sheekh Maxamed oo kaga hadlaya qeybtan labaad ee khudbadiisii halista ku-tagri-falka hantida ummada, sida loogu xadgudbo ayaa ku bilaabay; “Waxa ka mid ah sida loogu xadgudbo hantida ummada in adeega guud wax laga isticmaalo, sida laydhka, biyaha, gaadiidka, waxyaalaha ummadu wada leedahay. Qof baa intuu qasabad biyo jabsado, odhana waa waxii dawlada oo iska cabaya, hantidii ummada ayuu cunay, oo tuugada ayey ka mid tahay. Waxa ka mid ah qof xil kursi loo dhiibo oo ku faa’iidaysta kursigaa, oo maalmaha uu joogo ku xisaabtama wax ka qabso. Marka xukuumad la magacaabo, qabiilada iyo reer walba waxuu yidhaahdaa imisa ayeynu ka helay? Inuu qofku kursigaa ka faa’iidaysto am acid uga faa’iideeyo, taa tii nebigu NNKH ka digay.”
Sheekh Maxamed ayaa sheegay inay hantida la wada leeyahay shirkad ama dawlad oo lagu xadgudbo ka mid tahay, waxaanu yidhi; “Sida loogu xadgudbo hantida ummada wax aka mid ah in la iibsado gawaadhi qaali ah, ama guryo qaali ah, qalab gurri qaali, iyo wayaalo farabadan oon loo baahnayn oo masuul u iibsado I arkaay! Waxa laga yaaba in ninkii wasiirka ahaa, ama agaasimaha ama gudoomiyaha shirkada ahaa isagoo helaya gaadhi shan kun ah inuu qaato gaadhi sideetan kun ah, maxaa kalifaya, ummada uguma dannaynayo ee isagaa dannaysanaya. Waxay ka mid tahay ku xadgudubka hantida ummada, waa inaad u dhaqantaa sidii agoonta waxooda loo ilaalinayey.”
In la burburiyo hantida ummada ka dhexeysa ayaa ka mid ah sida loogu xadgudbo hantida, ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi; “Waxaynu aranaa dhaqan xumada ummada qaarkood ku kacaan, ama barteen samaynteeda, hadii mudaharaadyo dhacaan waxaad arkaysaa ugu horeyn waxa la burburiyaa hantida la wada leeyahay, guryaha, gawaadhiga dawlada, marka laga soo noqdana waxa la odhanayaa maxaa naga galay waa waxii dawlada.
Hantida ummada wada lahayd oo dadka qaarkood iska galaan ama iska qabsadaan, waa xadgudub ayuu sheegay Sheekh Maxamed, waxaanu yidhi; “Qofka iska qabsada ama gala hanti ummadu wada leedahay waa xadgudub, marka qaar kaloo tujaar ahna si gardaro ah u qaateen ama loogu dheefiyey, labaduba xaaraan ayey ku dhaceen, taajirkii iibsaday hantida ummada iyo Qofkii iska qabsaday hantida ee ka iibiyey.”
Dayacaad ku timaada hantidii ummada ka dhexeysay, gawaadhidii, guryahii oo qofkii ka masuul ah aanu ilaalin waxay ka mid tahay ku xadgudubka ayaa sheegay Sheekh Maxamed.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in sababaha loo ilaaliyo hantida ummada waxa ka mid ah qofka lagu tarbiyadeeyo diinta waxaanu yidhi; “Sababaha loo ilaaliyo hantida ummada waa in qofka lagu tarbiyadeeyo oo quluubtooda lagu beero in Ilaahay arkayo, oo aanay maxkamadna iska eegin, maamulna iska eegin, dawladna iska eegin, ee Ilaahay iska eego, marka qofka dareenkaasi galo ayaa laga nasan karaa. Markii dawladii kisra ee gaalada la jebiyey ayaa colkii muslimiintu soo qaadeen qalabkii iyo taajkii boqorkii kisra adeegsan jiray, oo wada dahab ah markuu Cumar binu khadaab arkay ayuu yidhi ‘Walaahi dadkaa hantida soo qaaday, een kala qeybsan ee amiirkoodii u keenay waa aamin’. Cumar isagaa amaano lahaa dadkii ka hooseeyeyna waxay noqdeen aamin. Marka hantida ummada la doonayo in la ilaaliyo waa in qofka xukuma uu aamin noqdo, si ka u hooseeyana uu kaga daydo. Ka u weyna haduu halqafo, ka u yarna ma joojin karo, waa wax iska macruuf ah.”
Siyaabaha loo ilaaliyo hantida ummada wax aka mid ah in qofka xil loo dhiibayo lagu xusho aaminnimo, waxa ka mid ah in marka qofka xil loo dhiibayo la tirakoobo hantidiisa, marka uu shaqada ka tagana la tirakoobo, si loo ogaado waxa ku kordhay, oo loo weydiiyo halkuu ka keenay, miyuu shaqeystay, miyaa loo hadyeyeeyey, miyuu halqafay?” ayuu sheegay Sheekh Maxamed.
Sheekh Maxamed ayaa sheegay in loo baahan yahay in ummadu dareen u yeelato ilaashashada hantidooda, isla markaana saxaafada iyo mucaaradku noqdaan kuwo soo jeeda oo ku qeyliya qofkii hantida ummada isku daya inuu qaato, markaas ayuu qofkii doonayey inuu qaato ka joogsanaya,taasoo lagu ilaalin karo hantida ummada.
Weriye Maxamuud Cali Sh. Maxamed (Walaaleeye)
Previous articleTabashad Waxaa Dawayn Kara Cadaalad, Beesha Musharaxii Xisbiga Wadani Ee Gobolka Saax Oo Xilalkii Dawliga Ahaa Ku Waayay Olalhii Doorshadai
Next articleMuddadii labada sanno ahayd ee aan wasiirka Madaxtooyada ahaa tacab faro badan ma galin dhismaha iyo fayo-tirka wasaarada madaxtooyada gudaheeda,Waa hadalkii wasiirkii Hore Ee Madaxtooyada Somaliland Oo Xilkii Ku Wareejiyay Agasimaha Cusub Ee Madaxtooyada Somaliland